Apple ayaa iibsatay Shazam, iyagoo xaqiijinaya wararka xanta ah ee maalmihii u dambeeyay | Waxaan ka socdaa mac
Sidii aan ku dhawaaqnay dhowr saacadood ka hor, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay la soo baxday buugga jeegga si ay ula wareegto shirkadda Shazam, oo ah shirkad caan ku ah adduunka oo dhan inay tahay codsi aan dhammaanteen adeegsanno markay tahay garowsado heesaha aan aadka u jecel nahay laakiin aan garanaynin sida cinwaankoodu yahay.
Ugu dambeyntiina, sida ay ku andacoonayaan warar badan oo xan, Apple ayaa hadda ku dhawaaqday, iyada oo loo marayo warbaahin kala duwan, waxay isbarbardhigeysaa barxadda aqoonsiga muusikada, iibsi aan si gaar ah u jaban ahayn, tan iyo markii ay ahayd inuu bixiyo 9 tirooyin, gaar ahaan 400 Milyan dollar.
Bayaanka ay Apple u dirtay warbaahin kala duwan, waxaan ka aqrisan karnaa:
Waxaan ku faraxsanahay in Shazam iyo kooxdiisa hibada leh ay ku biirayaan Apple. Tan iyo markii la bilaabay App Store, Shazam wuxuu si isdaba joog ah ugu taxanaa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee loogu talagalay macruufka. Maanta, waxaa adeegsada boqolaal milyan oo dad ah oo adduunka ku baahsan, oo ku baahsan meerayaal badan.
Apple Music iyo Shazam waa urur dabiici ah, wadaaga dareen ku saabsan helitaanka muusikada iyo gaarsiinta khibradaha muusikada ee weyn adeegsadeyaashayada Waxaan haynaa qorshayaal xiiso leh waxaana rajeyneynaa inaan ku darno Shazam markaan ansixino heshiiska maanta.
Ilaa iyo hada, Apple waxay lashaqeysay Shazam markay u timid soo bandhigida macluumaadka laxiriira heesaha uu kaaliyaha Apple awoodo inuu aqoonsado, mahadsanid shaqada cusub ee uu helay dhowr sano ka hor, laakiin hawlgalkoodu wali kama muuqdo Shazam korkiisa, iyada oo aan la xusin waqtiga ay qaadanayso in la aqoonsado lana muujiyo macluumaadka ku saabsan heesta hadda socota.
Sida caadiga ah, Apple ma aysan shaacin qorshayaasha mustaqbalka ee ay la leedahay Shazam, Laakiin waxay u badan tahay in qayb ka mid ah tiknoolajiyada aqoonsiga ee loo adeegsado sirdoonka macmalka ah, uu noqdo qayb ka mid ah Siri, sidaa darteed mar iyo dhammaanba, waxay noqoneysaa in ka badan kaaliye si loo weydiiyo macluumaadka ku saabsan cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple ayaa iibsatay Shazam, iyagoo xaqiijinaya wararka xanta ah ee maalmihii la soo dhaafay
Apple waxay sii deysay beta-kii ugu horreeyay ee macOS High Sierra 10.13.3 ee loogu talagalay soo-saareyaasha
Barnaamijka TV-ga ee Apple TV waxaa lagu arki karaa qaar ka mid ah dalalka Yurub